Afaanota durtii fi qindaa'inoota gitoo biyyaa biroo galmeeleef qindeessa.
Afaan walquunnamaa fayyadamaatiif, fakkeenyaaf baafattoota, gongeelee dhaamsaa, faayilii gargaarsaatiif fayyadu filadhu. Yoo xiqqaate qarqabi afaanii dabalataa ijaarame tokko yookiin fooyya'a afbaay'ee LibreOffice qabaachuu qabda.
Qindaa'ina gitoo biyyaa
Jijjiiramni badhee kanaa battalaan raawwata.Garuu,gitoonni muraasni kan durtiin tottolchaman yoo galmeen haaraa fe'ame qofa jijjiiramu.
Galfatni durtii gita maallaqaa kan qindaa'ina gitoo biyyaa filatamaniif ramadamuuf raawwata.
Jijjiiramni badhee Maallaqa durtii gara galmeele banaa hundatti darbee akkasumas gara gita jijjiirama gongee dhaamsaa keessaa fi saajoo kan gita maallaqaa galmee kunneen keessatti to'antanitti tara.
Furtuu addaan baasaa deesiimaalii - Qindaa'ina gitoo biyyaan tokkuma
Akka Furtuu addaan baasaa deesiimaalii kan yeroo gita furtuu paadii lakkoofsaa irraa tuqxu sirna kee keessatti qindaa'u ifteessa.
Yoo sanduuqni dhugoomsaa kun kaka'e,qubeen "Gitoo biyyaa wajjin tokkuma" booda mul'ate yeroo furtuu paadii lakkoofsaa irraa dhiibdu saagama.Yoo sanduuqni dhugoomsaa kun hin kakaasamne,qubeen sooftweeriin ooftuu gabatee furtuu keetii kennu ni saagama.
Afaanota durtii galmeeleef
To'annoon qubee kan afaan filatamee yeroo gita muraa afaanii ijaarte qofa hojjeta. Galfatni afaanii of duraa mallattoo filannoo yoo to'annoon qubee afaan kanaaf kakaasame qaba.
Yoo Chinese, Japanese yookiin Korean barreessuu barbaadde,walquunnama fayyadamaa keessatti gargaarsa afaanota kanaa kakaasuu dandeessa.
Afaanota Teessuma Barruu Xaxamoo Fayyadaman
Galmee ammee qofaaf
Gargaarsa ida'ataa afaanii